ဘိလပ်မြေပိုက်များ မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်
ဘိလပ်မြေပိုက်ပြုလုပ်ခြင်းစက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများ- ပထမဦးစွာ၊ ပစ္စည်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှု- ဘိလပ်မြေပမာဏနှင့် အရည်အသွေးသည် အရေးကြီးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။သုတ်စဉ်အတွင်း ဘိလပ်မြေပမာဏကို သင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘိလပ်မြေပိုက်၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တာရှည်ခံနိုင်မှုအား တိုးလာစေနိုင်သည်။သို့သော် အလွန်အကျွံ ဘိလပ်မြေ...
admin မှ 22-06-14 ရက်နေ့တွင်
ဂြိုလ်ဝင်မွှေစက်သည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့် မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ရုန်းအားထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပစ္စည်းရောစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။တစ်မူထူးခြားသော ဂြိုလ်ရောစပ်နည်းပညာသည် သတ္တုဓာတ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရောစပ်နိုင်စေကာ ရောစပ်ချိန်ကို လျော့နည်းစေကာ ရောစပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ p...
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော သုတ်ဆေးစက်ရုံကို ဖိလစ်ပိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
6-13-2022 တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် 60m3 ခရီးဆောင်ကွန်ကရစ်ဖော်စပ်စက်ရုံတစ်ရုံကို အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် အမှားရှာခြင်းတို့ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။မိုဘိုင်းကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ၏ အားသာချက်များ- ၁။ မိုဘိုင်းရောစပ်စက်ရုံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လျစ်ပြီး ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးနီးပါး၊
မိုဘိုင်းအလျားလိုက် ဘိလပ်မြေ silo
အလျားလိုက်ဘိလပ်မြေ silo သည် သာမာန်ကော်လံအမျိုးအစားဘိလပ်မြေကန်များကဲ့သို့ပင် 30 တန် ၊ 50 တန် , 60 တန် , 80 တန် , 100 တန် , 150 တန် , 200 တန် နှင့် အခြား ဘိလပ်မြေကန်များ ပါရှိပြီး အလွှာနှစ်ထပ် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ။ ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ရေပြင်...
MP1500 mixer တပ်ဆင်ပါ။
ဂုဏ်ပြုပါသည်။ဖောက်သည်သည် ၎င်း၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စိတ်ကြိုက်ဖွင့်လှစ်ထားသော တံခါးနှစ်ပေါက်ပါသည့် ယူနစ်ဂြိုဟ်ဝင်မွှေစက်တစ်ယူနစ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့်လတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ဘောလိုင်းနှင့် ကွန်တိန်နာပြတ်လပ်မှုကို ကျော်လွှားကာ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပြီး ဖောက်သည်များအတွက် အမြန်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။Client က ပစ္စည်းကို စိတ်ကျေနပ်စေပါတယ်...
ဒယ်အိုးမွှေစက် နှစ်လုံးအား ဝယ်ယူသူထံ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် မေလတွင် ဖောက်သည်များအတွက် 4m3 pan mixer နှစ်ယူနစ် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ဓာတ်မြေသြဇာ ရောစပ်ခြင်းအတွက် ဤဖျော်စက်သည် Skip Hopper နှင့် Belt Conveyor ကိုအသုံးပြုပြီး ဖောက်သည်၏ အထူးတောင်းဆိုချက်အရ ရောစပ်ထားသော Mixer ကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါသည်။ဤသည်မှာ ဓာတ်မြေသြဇာထည့်မွှေစက်၏ ထူးခြားချက်များဖြစ်သည်- MP စီးရီး...
Self loading concrete mixer ပို့ဆောင်ခြင်း။
2022 ခုနှစ် ဧပြီလ2ရက်နေ့တွင် ကွန်ကရစ် ရောစပ်ကား တစ်ယူနစ် တင်ဆောင်ပြီး ဖောက်သည်ထံ အောင်မြင်စွာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ဤထုတ်ကုန်များအတွက် အင်္ဂါရပ်အချို့ အားသာချက်များ ရှိသည်- ရောနှောပါဝင်သည်- အမျိုးအစား II ကိုယ်ထည်၊ ဂီယာစနစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ ဖရိမ်၊ ရောစပ်သော တိုင်ကီ၊ အစာကျွေးခြင်းနှင့် အားသွင်းကိရိယာ၊ ရေစုပ်...
အလျားလိုက် ဘိလပ်မြေ silo ပေးပို့ခြင်း။
မိုဘိုင်း 60T အလျားလိုက် ဘိလပ်မြေ silo အပြည့်အစုံကို 40HQ တွင် အောင်မြင်စွာ တင်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ဤ silo အမျိုးအစားကို ကွန်တိန်နာဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဖောက်သည်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည့် ကွန်တိန်နာများဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည်။အလျားလိုက် silo ၏အားသာချက်များ- 1. တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် disassembly အဆင်ပြေသည်၊ အခြေခံအုတ်မြစ် ...
ပတ်ဝန်းကျင် ခြောက်သွေ့သော အင်္ဂတေအသုတ်စက်ရုံ
အင်္ဂတေအခြောက်သုတ်ထားသော အပင်များ၏ စွမ်းဆောင်မှုလက္ခဏာများ 1. ရောစပ်မှုအမြန်နှုန်းသည် မြန်ဆန်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် ရောမွှေရန် 8 မိနစ်သာ ကြာပါသည်။2. စက်ကို အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း၊ လေထုတ်လွှတ်ခြင်း၊...
Sicoma mixer ကို အလုပ်ရုံတွင် တင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် SICOMA MAO3000/2000 ကွန်ကရစ်ရောနှောကိရိယာနှင့် ဂီယာဘောက်စ်၊ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တစ်ယူနစ်ကို တင်ဆောင်ထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အမှာစာ batching စက်ရုံသည် SICOMA ရောနှောခြင်းနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။Scoma mixer သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် စျေးကွက်ဝေစု 60% နီးပါးရှိသည်။သုံးစွဲသူများသည် SICOMA ကို JS mixer မှ ပိုနှစ်သက်သည်...
HZS75 အသုတ်စက်ရုံ ပေးပို့ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုလတွင် HZS75 ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံ တစ်ယူနစ်ကို အောင်မြင်စွာ တင်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်သည် သုတ်လိမ်းရန်အတွက်5မီလီမီတာအထူပြားကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပြီး အခန်းတစ်ခုစီသည် 12m3 ရှိပြီး ပိုမိုများပြားသောအညစ်အကြေးများနှင့် သဲများကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတ်ဆေးစက်ရုံကို ဒုတိယအကြိမ် မှာကြားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်လည်ပတ်နေသည့် အလွန်တည်ငြိမ်သည်...
Mobile 60m3 ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံကို အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ယူပါသည်။မိုဘိုင်း 60m3 ကွန်ကရစ်အသုတ်စက်ရုံကို ဖောက်သည်ဆိုက်တွင် အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် ထိတွေ့ကပ်ရောဂါကာလကို ကျော်လွှားပြီး ၎င်းကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်သည်။ကရိန်းနှင့် မီးစက်ကဲ့သို့သော ပြင်ဆင်မှုကို ဖောက်သည်က ဆိုက်တွင် ကြိုတင်၍ လှုံ့ဆော်ပေးသည်...